Dadka waawayn ay yihiin gibbering ku saabsan labada qalabka; Samsung Galaxy qod6 iyo iPhone 6 (Plus) tan iyo markii la soo bandhigay. Iyadoo naqshadooda cajiib ah oo cusub, fursadaha midabka jiidasho leh, ka mid ah qaababka kale, gmail, kuwan waxaa socda tartan ku dheehan yahay dadka u baahan tahay in la ogaado casriga ugu fiican ee sanadka. Si kastaba ha ahaatee, Galaxy qod6 Edge waxaa ku dhowaad soo baxaya ugu fiican, laakiin sida ay u garaaci karaan ay horjeeda weyn ka Apple, iPhone 6 Plus? iPhone 6 Plus waa Apple ee flagship, iyadoo jidhkaaga u khafiif ah, iyo kamaradaha ay qeexitaanka sare marka la barbar dhigo ka horreeyay. Samsung iyo Apple Labada suuqa casriga qaaday duufaanka, Iyo xeesha (Galaxy qod6 Edge iyo iPhone 6) kasoo muuqday shaashadaha ugu weyn ee abid.
Qalabkani kasoo muuqdo ugu horumarsan hardware, software, iyo adeegyada Details. Si kastaba ha ahaatee, Samsung waxaa lagu soo muuqan a qalooca bandhigay dual gaar ah, iyada oo la filayo in uu soo jiito macaamiisha badan oo ay technology dambeeyay. Laakiin ka hor inta aanan u guda galin gunaanad, waxaa wanaagsan in aan is barbar qeybo ka mid ciyaaray oo ay labadaan gmail cajiib ah, si aynu u samayn karaa gunaanad aan eex lahayn.
Galaxy qod6 Edge
Galaxy qod6 Edge Price
The Samsung Galaxy qod6 Edge waxaa laga heli karaa at sidayaal oo ay ku jiraan AT & T, Verizon, iyo qaran - iyadoo qiimaha laga bilaabo $299.99, iyadoo heshiis labo sanno ah. Ugu T Mobile ah, qiimaha bilaabo $ 0 hoos iyo $32.49 bishiiba afar iyo labaatan bilood. Samsung Galaxy qod6 Edge sidoo waxaa laga heli doonaa sidayaal iyo dukaano, oo ay ku jiraan Cricket Wireless, xoojiso Mobile, Amazon, MetroPCS, Sam ee Club, Costco, Walmart, iyo Target. Tani casriga ah bilaabataa qiyaastii $ 699 quful, waxayna ku xiran tahay dukaan ama side.
Galaxy qod6 Edge Details (Software)
Samsung Galaxy qod6 Edge ayaa 5.0 nidaamka qalliinka Android hurdiga ah by Google. The version (dambeeyay) waxaa ka mid ah interface Waxyaabaha Design in nidaamka fudud oo sahlan in ay maraan ka dhigaa. Samsung ayaa nadiifinayaa TouchWiz interface ka user in qoreysa midabada, kuwaas oo xiriir la leh codsiyada kala duwan. Bogagga telefoonka ayaa lagu muujiyey in cagaaran, video app bogaga lagu muujiyey guduud, iyo xiriirada app pages ayaa lagu muujiyey orange. On top of in, Samsung ayaa u wareegay oo ka walxood in qoraalka, kuwaas oo bixiya aqoonsi fiican codsiyada kala duwan. Samsung ay iskaashi la Blackberry si ay u dhexgalaan Knox Software la WorkLife iyo SecuSUITE, iyada oo ujeedadu tahay ee lagu hagaajinayo ammaanka.
Galaxy qod6 Edge Details (xusuusta iyo kaydinta)
Samsung Galaxy qod6 Edge ayaa 3GB ee RAM, iyo fursadaha xasuusta gudaha waxaa ka mid ah 32 GB, 64 GB, iyo 128 GB. Qadarka sare ee RAM caawisaa orod casriga ah si dhakhso ah. Qalabka wuxuu sidoo kale lagu kaydiyo gudaha oo muddo dheer ah, tan iyo markii uu jiro dib u saari laga helay tusaalayaal hore u lahayn. Sidaa darteed, dadka isticmaala ma fidin karaan awoodda kaydinta, laakiin waxay ka heli kartaa xasuus dheeraad ah oo ka mid ah sanduuqa. Out of 32 GB ee qalabka Galaxy qod6 Edge, 23 GB ayaa diyaar u ah dadka isticmaala, halka 9 GB aado nidaamka qalliinka iyo software ah pre-rakibay.
Camera Galaxy qod6 Edge
Samsung Galaxy qod6 Edge ayaa 16- megapixel camera dib, la xasilinta image indhaha, iyo sidoo kale 5-megapixel kamarad hore. Dib / camera ayaa gadaal ka kooban yahay f / 1.9 gashto aperture u ogolaanaya iftiinka badan ee lenses oo ka mid ah waayeelka ah lagu daydo Samsung Galaxy, iyo tani waxay u oggolaanaysaa sawiro af. The shot iftiinka hoose iyo-waqtiga dhabta ah muuqaalada qaadey kaloo kordhisaa qaadashada sawir. Sida ay Samsung, taas Galaxy qod6 Edge waa awooda inay qaataan ka xoogbadan, sawirada light hooseeyo marka la barbardhigo iPhone 6 Plus.
Qod6 u eegidda Edge
1. Waxa aan jeclahay oo ku saabsan telefoonka tani waa camera. Waxay soo saaraan pictures- tayo dhab ahaantii sare By Kumar, Hindiya.
2. Phone ayaa ku soo beegmay iyadoo meel weyn, waa camera android iyo awood leh. Si xoog leh ayaan teedu talinaynaa By Ken Mannase, Mozambique.
3. Iyada oo ay xasuusta gudaha oo keliya, ayaan si raaxo gelin karo files, heeso iyo sawiro. Maxaa kale oo aan u waydiin kartaa - By warran Inovolov, Germany
4. Kaasi xabbad la yaab leh! Its muuqaalka gaar ah ii dishaa! - By Ching Li Yau, Shiinaha.
5. Qaababka ay waan jeclahay sida camera weyn, nidaamka qalliinka iyo xusuusta gudaha waasac - By Tonny Harrison, Holand.
iPhone 6 waxaa laga heli karaa sidayaal oo ay ku jiraan AT & T, Verizon, iyo qaran laga bilaabo $299.99, iyadoo heshiis labo sanno ah. Iyadoo at T Mobile ah, waxay ka bilaabaneysaa $ 0 hoos iyo $31.34 bishii labaatan afar bilood. Iphone 6 ayaa sidoo kale waxaa laga heli karaa dukaamada Apple sidoo, iyada oo online. Tani casriga ah bilaabataa qiyaastii $ 749 quful, waxayna ku xiran tahay dukaan ama side.
iPhone 6 Details (software)
IPhone 6 ayaa sidoo kale nidaamka qalliinka macruufka 8 in uu leeyahay muuqaalada sida; farriimaha is-dhexgal, teebabka dhinac saddexaad, horumarinta ID Touch, mail, fariimaha, iyo updates toosh ka mid ah codsiyada kale.
iPhone 6 Details (xusuusta iyo kaydinta)
The iPhone 6 Plus ayaa RAM ah 1GB, iyo fursadaha lagu kaydiyo gudaha waxaa ka mid ah 16 GB, 64GB, iyo 128GB. Users Qaar badan oo ka cabato RAM ayaa la kordhiyay, laakiin Apple ayaa sheegay in qalabka la soo filaayo, si aysan u baahan RAM badan. Xusuustiisu gudaha ka bilaabantaa 16GB, iyadoo saddex jeer meesha bannaan ee loogu talagalay $ 100 oo dheeraad ah. The nidaamka qalliinka macruufka isticmaalaa ilaa 3GB xasuusta guud, la 13GB diyaar u ah dadka isticmaala. Si kastaba ha ahaatee, kuwa u baahan tahay xusuusta ka badan, 64GB noqon kartaa doorasho fiican.
IPhone 6 ayaa sidoo kale gadaal camera 8-megapixel ah, iyadoo xasilinta image indhaha, sidoo kale 1.2 megapixel camera hore. Camera waa mid caadi ah, oo ay ku jiraan gashto f / 2.2 aperture ah. The iPhone 6 Plus ee xasilinta image indhaha ka caawisaa dadka isticmaala in ay sawiro la isku dari kara yar qaato, laakiin iPhone 6 ma. Apple ayaa sidoo kale ka mid ah qaababka mooshin iyo walaacsan gaabis ah in ay camera app iPhone 6 Plus.
1. Tani waa wax soo saarka badan! Camera Great, xusuusta waasac iyo wax kasta ka sarreeya, macruufka 8 hawlgalka nidaamka By Kagan, Kenya.
2. Phone waxa uu yimid iyadoo xasuus weyn gudaha, waxaan xitaa ma u baahan tahay in mid ka mid ah oo dibada! Waxaan teedu jecel By Mercy Cooper, USA.
3. iPhone 6 saarta sawirada tayo sare leh! Miyuu xasuusta waasac. Maxaa ka soo baxay! - By Jenes ku bixiso, Ireland.
4. Anigu waan ku jeclahay la iPhone 6! Inkastoo ay tahay mid qaali ah, waxaa qiimo leh siiyey sifooyinka gaar u Student By Kayaki Kagawa, Japan.
5. Tani waa dhab telefoonka ee sanadka. Waa muuqaalada cajiib ah hadli teedu ku saabsan By Johnson Harse, UK.
Sida loo hagaagsan Laba iPhone in Mid ka mid ah Computer
> Resource > iPhone > isbarbardhiga Galaxy qod6 Edge iyo iPhone 6